गफ ! .....: 2012
लघुकथा : कर
धूलो खेलिरहेको छ सातवर्षे बालकले माटोका डल्लाहरु तीनठाउँमा चाङ्ग लगाएको रहेछ । संयोगले ऊ त्यसदिन मैले काम गर्ने ठाउँमा खेल्दैरहेछ । जब म आफ्नो काममा पुगें । उसले अन्दाज लगाईहाल्यो कि अब उसले खेलमा निर्माण गरेको संसार म त्यसरी नै भत्काईदिन्छु जसरी ऊ वा उसका उमेरका बच्चाहरु कमिलाले दुलो छेउमा थुपारेको माटोको ढिस्को बिनाकारण भत्काउने गर्छन् ।
जसै म उसको छेउमा पुगें उसले आफ्नो सानो खेलक्षेत्रलाई साना हातहरु फैलाएर छोप्न खोज्दै भन्यो, 'केहि नगर्नु है याँ; अर्काले कस्तो दुख गरेर बना'को छ ।'
म उसलाई लखेटेर आफ्नो काम गर्न चाहन्थें त्यसैले थोरै झर्किएर भनें, 'के बनाइस्, माटाका डल्ला थुपारेर मैले काम गर्ने ठाउँमा?'
तब उसले एक एकवटा डल्लाहरुको चाङ्गलाई पालैपालो हातले देखाउँदै भन्यो, 'यो काठमाण्डुको धररा, यो ईन्ड्याको ताजमहल अनि यो चैं पेरिसको आफल टावर ।'
आफ्नो खेल तन्मयता र आफुसँग भएको ज्ञानका साथ जुन विश्वासले उसले मलाई त्यो कुरो भन्दै थियो - त्यो देखेर मलाई उसको कुरा पत्याउन कर लाग्यो |
Posted by दीपक जडित at 2:10 AM 1 comment: Links to this post
दशैं गफ : दशैं, फेसबुक र कविताहरु
उत्ताउलिनु केहि छैन । दशैं नै त हो आएको जो हरेक वर्ष आउने गर्छ ।
यसपाली दशैंको मेरो एउटा स्टाटस यस्तो थियो फेसबुकमा । भन्नलाई जे भनेपनि दशैं मनाउने परम्परा र संस्कृतिमा हुर्केका हामी मनुख्खेहरुलाई तर दशैंले नछोइ कहाँ छाड्छ ? हो छुने काइदा भने फरक फरक होला बरु; भूगोलको, मनको र ब्यावहारहरुको अवस्थाहरु अनुशार । म प्रशान्त महासागरले वेष्ठित धर्तीकै सूदुर पश्चिममा रहेको हवाईयन द्विपहरु मध्येको यौटामा छु । भाषा, संस्कृति लगायतका सामाजिक गतिविधीहरुको दृष्टिले म अनकण्टारमा छु भने हुन्छ । दशैं आयो है भन्ने सम्म अर्को कुनै नेपालीहरु वरपर छैनन् । त्यसैले दशैंको कुनै खास गतिविधीहरुमा सामेल हुने कुरा पनि छैन । आफ्नो यहि वास्तविकताको आधारमा पनि लेखेको हुँ मैले उपरोक्त फेसबुके स्टाटस । तर भनें नि, दशैंले भने जसरी भए नि छोएरै छाड्ने । जीवनमा आउन नसकेको दशैं यो सातसमुद्र पारीको गुप्तवासमा समेत मनमा भने आएको छ । र मनमा दशैं लिएर आउने माध्ययम चैं फेसबुक बनेको छ ।
सुर्ती, रक्सी जस्ता कुराहरुको महाअम्मलीले बरु अम्मल सेवन गर्न निक्कैबेरलाई छोड्ला तर यो फेसबुकको अम्मलीले छिनको छिनमा फेसबुकमा चिहाउन छोड्दैन । त्यै भएको छ मलाई । घरि पनि घरि पनि फेसबुकमा चिहाउँदै दशैं सम्बन्धि अरुका स्टाटसका विभिन्न कुराहरु पनि हेर्न भ्याएपछि मनभरी दशैंको उज्यालो भरिएको छ । मनभरीको यहि उज्यालोमा आज दिउँसो फुर्सद निकालेर दशैं केलाउन थालें । सानो छँदाको दशैं, अलि ठुलो हुँदाको र हालसालैका दशैंहरु काँसघारीमा कोटेरो जस्तै फित्रिक फित्रिक नाच्न थाले मनमा । सानाका कुरा छोडौं सबैसँग सानओ हुँदाको सम्झनाहरु थानका थान उपन्यास लेख्न पुग्ने गरेर हुन्छन् । हालसालैका दशैंहरुमा भने म बडा मौसमी कवि बन्ने गर्दो रहेछु र प्रायस सालहरुमा लेख्दो रहेछु दशैं शिर्षकमा मौसमी कविता । सम्झेर ल्याउँदा खुशी पनि लाग्यो । मौसमी नै सही, दशैंको मौसमले मलाई कविता लेखाउँदो त रहेछ । यो मौसमको रौनक फेसबुकमा अझ देख्न मिल्छ । दशैं कविता लेख्ने म जस्ता मौसमी कविहरु फेसबुकमा सायदै गनिसाध्य होला । नहोस् पनि किन आँखीर कविता पनि त दशैं जस्तै रमझम न हो । अथवा यसरी भनौं - कवि मनहरुलाई दशैं मौसमी कविता हो भने कविता सँधैंको दशैं हो । यहाँनेर दशैं चाडप्रति कारणवश पूर्वाग्रह राख्नुहुने मनहरुलाई म दशैंको शट्टामा अर्को आफुले मनपराउने वा मान्ने चाड राखेर बुझ्नुहुन सविनय अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु । मैले चैं दशैं नै आफुले मान्ने विशेष चाड भएकोले दशैं नै लेखें ।
जे होस् । मैले प्रायस दशैंहरुमा कविता चैं लेखेकै हुँदोरहेछु र यसपाली पनि फूलपाती भन्दा अगाडिनै लेखिसकेछु दशैं कविता ।
शिर्षक छ - यो दशैं हो
भूमिका केहि थिएन
निरिह खसीको गर्दन सम्झिएँ
र सम्झिएँ - यो दशैं हो ।
- सायद भूमिका यहि थियो ।
अर्थोक केहिले बताओस् नबताओस्
आँगनबाट एकोहोरो आउने
खसीको म्याँ म्याँले बताउँछ - यो दशैं हो
घरमा केटाकेटिहरु भए
तिनकै उज्यालोले बताउँछ - यो दशैं हो
घरमूलीको घुँडामा कुहिनो अडिएर
खप्परमा टाँसिएको हातले बताउँछ - यो दशैं हो ।
दशैं न हो
यो रवाफले पनि आउन सक्छ
धेरथोर खुशी पनि ल्याउन सक्छ
सर्लक्क तिम्रो अनुहार पढेर
अदवले तिमीलाई सोध्न सक्छ
'खसीको गिदी जिब्रो भुटेर
कुन रक्सी खाने हो यसपाली?
हात पनि त चिलाउँदै होला कौडा फ्याँक्न
कुन खालमा जाने हो यसपाली?'
छोड नियमले दिँदैन भन्ने कुरा
दशैंले आफैं जन्दछ आफ्नो नियम - यो दशैं हो ।
दशैं नै त हो
तिमी हामीले शरम मानेपनि
यो दशैं नै भएर आउँछ
र गाल पारेर जान्छ ।
कहाँ सक्थ्यौ तिमी ढोका थुनेर छेक्न यस्लाई?
साइत पारेर तिम्रो घरको ढोका
निधारले ढक्ढक्याउँछ - यो दशैं हो
तिम्रो गोजी, गल्ला, बाकस, थैली
प्यारले टक्टक्याउँछ - यो दशैं हो ।
मेरा दशैं कविताहरुमा दशैंले गरिवीमा पार्ने प्रभावहरु नै प्रमुखताका साथ लेखिँदा रहेछन् । आफ्नै नयाँ पुराना दशैं कविताहरुमा घोत्लिएपछि थाहा पाएँ । म कि त गरिवीको ब्याथा कि दशैंको विकृतिलाई निशाना बनाउँदो रहेछु । फेसबुकमा थुप्रै अरु दशैं कविताहरुमा पनि देख्न पाइन्छ यहि कुरा । अभाव सायद हामीले भोगेको साझा पीडा भएर हुनसक्छ यसो भएको । र दशैं चाड मनाउनेहरुलाई पनि दशैंमा हुने व्यापक काटमार जस्ता साँस्कृतिक बिकृतिहरु ठीक नलागेकोले चाहिँ दशैंका विकृतिहरु प्रति कवितामा व्यङ्ग्य कोरिएको हुनसक्छ । तर पछिल्ला दशैंहरुले यस्ता जायज व्यङ्ग्य भन्दा अलि धेरै व्यङ्ग्य सहन थालेको छ । प्रहार नै सहन थालेको छ भनुँ न । व्यङ्ग्य र प्रहार दुबै उस्तै लाग्ने कुराहरु भएपनि त्यसमा टड्कारो फरक देखिन थालेको छ आजभोलीको दशैंमा ।
दशैंलाई हिन्दुहरुको मात्र चाड हो भनेर प्रहार गर्ने धेरैसाथीहरु फेसबुकमा भेटिन्छन् । हो दशैं हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले नै मनाउने चाड हो तर वर्तमानको हाम्रो समाजमा हिन्दुवादी चाड भएको भनिएरै दशैंमा हिन्दुहरुले कटाक्ष खपिरहनु पर्ने कुरा कतिको युक्तिसंगत देखिन्छ? अझ क्षेत्री बाहूनहरुलाई दशैं चाड मनाउने भएकैले प्रहार गर्नु कति न्यायोचित हुनसक्छ? जबकि अहिन्दुहरुले पनि सामाजिक सद्भाव राख्दै दशैं मनाएको देखेको छु मैले र त्यो सर्वथा सुन्दर देखेको छु । जानीजानी वा नजानेरै लहै लहैमा यसरी यौटा संस्कृतिलाई ढलाउन प्रहार गर्ने फेसबुकका साथीहरुलाई सम्झाउँन त सायदै सकुँला म; किनभने उनिहरु भित्र दशैं पर्व तथा हिन्दु संस्कृति प्रति गहीरो पूर्वाग्रह भरिएको छ तर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आफ्नै तथा आफ्नै वरिपरीका संस्कृतिमा भएका विकृतिहरुलाई सुधार हुने गरेर प्रहार गरौं । त्यसबाट सबैको भलो होला तर समूल संस्कृतिलाई नै नष्ट गर्न प्रहार नगरौं त्यसले कसैको भलो गर्दैन ।
दशैं सम्बन्धि यो ब्लगको खुराक लेखिरहँदा मैले फेरि अर्को यौटा फुच्चे दशैं कविता लेखेर फेसबुकमा टाँसिसकेको थिएँ ।
वनावटी अभावका गतिला कथाहरु
फेसबुकका भित्तामा भित्ताहरुमा
अद्वितिय कविता रुप धारण गरी
फैलंदो छ फैलंदो छ ।
सुँगुर, हाँस, खसी, च्याँग्रा, राँगा
केहि नछोड्ने मैखासुरको सेतो दाँत जस्तै
शान्ति प्रियभै फेसबुकको पर्खालमा
टासिंदो छ टासिंदो छ ।
चित्रका विचित्र अक्षता जमरा सहित
लाग्ने नलाग्ने, हुँदो नहुँदो आशिष भइ
फेसबुकका झ्यालबाट निधारहरुमा
थापिंदो छ थापिंदो छ ।
अन्त्यमा, दशैं २०६९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सबै दशैं मनाउने नमनाउने मेरा साथीहरुलाई !
Posted by दीपक जडित at 9:46 PM3comments: Links to this post
लघुकथा : एकदिन
'आज के भो र किताब नलि' आइस्?' एकदिन उसको कानको जरी उखेल्दै हेडमास्टरले सोधे ।
'हेडसर, हाम्रो भर्‍याङको तीन्टा खुट्किलो भत्केको छ । म किताब लिन माथि जानै सकिंन ।' उसले आत्मविश्वासका साथ कहानी रचेर सुनायो ।
'घरका अरुलाई किताब झिक्देओ भन्नु पर्दैन त?' हेडमास्टरले कानमुन्तिर ठ्याम्का लगाए ।
'आमा पानी लिन ग'कि थि'न्, घरमा अरु क्वैपनि थे'नन् ।' रातो भएको अनुहारले उसले अर्को छोटो कहानी सुनायो ।
हेडमास्टर र उसको बिच भएको यो चलचित्रमय दृश्यले कक्षाकोठामा मनोरन्जनको वातावरण बनाईरहेथ्यो । अरु विद्यार्थीहरु हेडमास्टरको केरकार लम्बिए आफु सजायबाट बच्ने कुरामा मख्ख हुँदै मनोरन्जन लिँदैथिए । हेडमास्टरलाई पनि पढाउनु समेत नपर्ने गरेर मनोरन्जन प्राप्त भैरहेको हुँदो हो । सम्झिएझैं सोधे, 'अनि अस्ति किताब नल्याउँदा तैंले लिस्नो लडो' भनेको हैन? अस्तिको लिस्नो आज कसरी भर्‍याङ भयो?'
उसले पिर्लिक्क आँखा पल्टाएर हेडमास्टरको आँखामा जुधायो । चोर त यसै छँदैथिएँ पक्रा पर्ने भएँ भन्ने लागेको हुँदो हो उसलाई । हेडमास्टरले फेरि जोडले कन्सिरी उखेले ।
'अनि त्यो लिस्नो लडेपछि हाम्रो बाउले भर्‍याङ बनाए नि त ।' किन्चित डर नमानी उसले फेरि कहानी थप्यो ।
'तँलाई लठुवा! ढाँट्छस्? भर्‍याङको खुट्किला भत्केर किताब ल्याउन नसक्नेले त्यो झोला कसरी झिकेर ल्याइस्?' माझ टाउकोमा एक पड्याङ्ग भेट्यो उसले ।
'झोला त मैले हिँजै धो'को थें अनि सुका'को ठाउँमै विर्षेछु राती उठाउन ।' जवाफमा अर्को कथा अघि नै तयार गरेछ उसले फट्ट सुनायो ।
हरेकदिन जसो उ र सरहरु माझ मञ्चन हुने नाटक यस्तै हुन्थ्यो । किताब ल्याउन विर्षिन्थ्यो या जानी जानी ल्याउँदैनथ्यो तर झोला सँधै बोक्थ्यो उ । झोलामा पुराना टर्चलाइट, ब्याट्री, सलाईका डिब्बा ईत्यादि सामानहरु हुन्थे मानौं उ कुनै खुद्रा पसलको सेल्सम्यान हो र सामान बेच्न हिंडेको छ ।
सरहरुको हातको पिटाई नखाएको दिन सायद उसको जिन्दगीको सबसे लोदर दिन हुन्थ्यो । तर पढाईमा उसको तेज कक्षामा मन आँक्न मिल्ने थिएन । उ प्रथम, दोस्रो, तेसो कहिल्यै भएन तर फेल पनि कहिल्यै भएन । त्यहि स्कूलबाट एसएलसी दिउन्जेलसम्म उसको आदत साबिक नै थियो । गृहकार्य नगर्ने, किताब बोकेर नआउने, सामान्य उपध्रो गरिरहने ।
एसएलसीमा मुश्किलले एकाध विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा उतिर्ण गराउने त्यस स्कूलमा दोश्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेर उ कता गयो कसैले थाहा पाएन ।
वर्षौंपछि एकदिन -
जिल्लाको एउटा साहित्यिक संस्थाले जिल्लाभरीका साहित्यकारहरुलाई बोलाएर अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम बनायो र त्यहि स्कूलको मञ्चलाई कार्यक्रम स्थल छानियो । उनै हेड मास्टरले जिल्लाभरीका कवि, लेखकहरुलाई सम्मानपत्र दिने र खादा पहिर्याउने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
कार्यक्रममा सबभन्दा पहिले यसैवर्ष साहित्यमा देशकै सबभन्दा सम्मानित पुरस्कार पाएर चर्चाको शिखरमा रहेका युवा कथाकारलाई बोलाईयो । उनको बारेमा आयोजकका तर्फबाट कसैले मनग्गे चर्चा गरेपछि हेडमास्टरको बाहुलीबाट सम्मान पत्र र खादा अर्पण गरेर उनलाई केहि बोल्न लगाईयो ।
युवा कथाकारले आफ्नो गला अवरुद्ध पार्दै भने, 'म आज मलाई सानैदेखि कथा रच्न बाध्य बनाई प्रेरणा दिनुहुने गुरुवरको हातबाट यो सम्मानपत्र थाप्न पाउँदा भाग्यमानी बनेको छु ।............' कथाकार आफ्नो स्कूलको वाल्यकालका घट्नाहरु बताउँदै गए; हेडमास्टरको आँखा कहिल्यै किताब नल्याउने त्यो लठुवा विद्यार्थी पसेर भरिंदै आयो ।
Posted by दीपक जडित at 5:00 PM3comments: Links to this post
कविता : पुतलीपाखा
सालन्ने आउँथ्यो हूरी
र उडाएर लैजान्थ्यो मेरो घरको छानो ।
ल्यु सूनले जस्तै मैलेपनि
सालन्ने भेला गरेको छु
अलिकति करेसाको रुखबाट
अलिकति छिमेकीको आँगनबाट
अनि अलिकति आफ्नै मकैबारीबाट
आँधीहूरीमा छिरोलिएर भिजेको
मेरो घरधूरीको खरपराल ।
कस्ले निको मान्न सक्छ
मसमसी निदाएर मीठो सपना देख्न चाहँदा
धूरी चुहिएर कानमा पानी पसेको?
कतिञ्जेल थाप्न सकिन्छ
यो कुना र उ कुना ओच्छ्यान पल्टाउँदै
रातभरी जागेर सिह्रानीमा कसौंडी?
घुर्यानमा आउने एकविहानको घाममा
ओल्टाईपल्टाई सुकाएझैं गरेपछि
आफैं चढेर छाएको छु मैले
आँधीको थप्पडले रुँदै गरेको छानो
बाँधेको छु धूरी अलि कसेर
थिचेको छु पुतलीपाखा भाटा थपेर ।
खर पराल धूरीमा चढाउँनै छाडिए
चोयाबाताहरु काढ्नु परेन
दाँती काट्नु परेन
भाटा खिप्नु परेन ।
घर छँदैछ तर
छानो छाउँने चिन्ता मेटियो
धूरी हराएर गयो
पुतलीपाखाहरु बाँकि रहेनन् ।
आँधीहूरी आइरह्यो उसैगरी
क्षति फरक पर्दै गयो
उड्दै जानथाले मनका धूरीहरु
बढ्दै जानथाले मनका दुरीहरु ।
पूर्वपश्चिम फर्किएको धूरी भएको
सिङ्गै देशमा म
सालन्ने आँधीले उधारेको धूरी मार्दै
सालन्ने हूरीले झारेको पुतलीपाखा छाउँदै
पूर्वको पुतलीपाखामा हुर्केको थिएँ ।
आज आँधीले मनहरु उडाउँदा
कसैगरे पत्तो पाउँदिंन
कता फर्केको छ मेरो मनको धूरी?
कहाँनेर छ मेरो मनको पुतलीपाखा?
Posted by दीपक जडित at 5:30 AM No comments: Links to this post
गजल : अस्ताउँछन् घामझैं उदाउनेहरु
होसियार आकाशमा छाउनेहरु ।
अस्ताउँछन् घामझैं उदाउनेहरु ।
भरिएपछि अवश्य पोखिन्छ भन्ने,
विर्षन्छन् सँधै प्रेम खन्याउनेहरु ।
मेरै सम्मानले झन् झन् बढेर गए,
यो देशमा ऐंजेरु पलाउनेहरु ।
उ आए ति ल हेर हौदामा बसेर,
हात्तीछाप चप्पल लगाउनेहरु ।
पानीझरीमा कहाँ गै ओतिँदा होलान्,
आफ्नै घरको छानो भत्काउनेहरु ।
नामी नामी कथाकार बनिसकेछन्,
मलाई मेरै कथा सुनाउनेहरु ।
अचानोलाई साथी हो भन्थ्यो खुकुरी,
रुँदैथिए सँधै चोट पाउनेहरु ।
भन्दैथिए हामी त हराउँनै सकेनौं,
धेरैपछि फर्केर आउनेहरु।
धेरैजसोले आजै हार मानिसके,
हिँजो मलाई रीस उठाउनेहरु ।
हाम्रोमा त अपवाद भै'गयो अन्त,
थपिथपि खाँदैनन् अघाउनेहरु ।
Posted by दीपक जडित at 6:55 PM No comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 7:41 AM No comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 4:19 AM6comments: Links to this post
कविता : चप्पलहरुको देशमा
चप्पलहरु केवल सडकलाई देश देख्छन्
फेरि लतारिन्छन् सडकमा
र सडकमै सेलाउँछन् चप्पल अस्तु ।
सुन ए चप्पलहरु!
यौटा चप्पलको यो सानो आग्रह कविताले बुझेनौ भने
जुत्ता लगाएका ठुला नेताहरुले बुझाउने छैनन् तिमीलाई
कि अवज्ञा, आन्दोलन, हड्ताल होस् वा जुलुस
हरेक पटक सडकमा किन चप्पलहरु मात्र छरिन्छन्?
चप्पलहरुकै हो यो देश
तर किन सडकमा
जुत्ताहरुको ईशारामा चप्पल घिसारिन्छन्?
जुत्ताहरु द्वारा चप्पल मारिन्छन्?
लेख्नै पर्दैन जवाफ
चप्पलको यो सानो आग्रह कवितामा
अब चप्पलहरुले आफैं बुझ्नुपर्छ - चप्पल मर्यादा
अब चप्पलहरुले आफै सिक्नुपर्छ - चप्पल संस्कृति
अब चप्पलहरुले आफैं जान्नुपर्छ - चप्पल सभ्यता
जुत्ताहरुको आदेश तामेली गर्नु पर्दैन ।
अर्थ नबुझेका नाराहरु कुर्लेर
उपयोगीता नहुने मागहरु तेर्स्याएर
बन्द, हड्ताल, धर्ना र जुलुस हिंड्ने
सडक मात्र हैन चप्पलहरुको देश
जुत्ताहरुको प्रलोभनमा नफसि
जुत्ताहरुको ईशारामा ननाचि
जुत्ताहरुको निशानामा नपरि
चप्पलहरुको गौरव टेकिएर हिँड
चप्पलहरुको सम्मान देखिएर हिँड ।
चप्पलहरुको यो देश
वेवारिस घिसारिनु पर्ने सडक भन्दा कयौं गुणा विशाल छ ।
चप्पलहरुको यो देशमा
चप्पलहरुको स्वाभिमान जुताहरुको भन्दा कयौं गुणा माथि छ ।
Posted by दीपक जडित at 5:51 AM No comments: Links to this post
कथा : एकचालीस दिनपछि
'उसले आजपनि केहि लेखेन ।.......' निक्कै दिनदेखि कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै जब उसको फेसबुक प्रोफाइल शून्य देख्छु म मनमा यहि कुरा दोहोर्याउँछु ।
दिमागभरि गन्जागोल हुनसक्छ । जिन्दगी नै गञ्जागोल सिवाय के छ र? यो गञ्जागोल जिन्दगीलाई त्यान्द्रा त्यान्द्रा संगालेर केहि गजब लेख्ने कोसिसमा धेरै रात भैसक्यो रे उ कम्प्युटर अगाडि अबेर अबेर सम्म टोलाएको । तर उसले लेख्न खोजेको के हो? अझै स्वयं अस्पस्ट छु भन्ने उसको स्विकारोक्ती सुनेको छु मैले । त्यसो त स्पस्ट भैसकेका धेरै कुराहरु लेखिसकेको हो उसले । धेरै कुराहरु लेखिरहेको पनि होला र धेरै कुराहरु लेख्न थाँति पनि होला । र पनि उसले केहि गजब लेख्न चाहेको कुरा मसँग ओकलेको एक जमाना भैसक्यो ।
मसँग उसलाई भन्न केहि रहेन । फिस्स हाँसेर बाटो लाग्न खोज्दै गर्दा उसले ईशाराले आफुले खिचेको फोटो हेर भन्यो । रुचिसाथ म उसको हातको ठुलो डिजिटल एसएलआर क्यामराको एलसिडी स्क्रिनमा भर्खरै उसले खिचेको शिरिषको नाङ्गो हाँगाको फोटो हेर्न पुगें । हात थर्थर कमाउँदै उसले मलाई भखरै खिचेका तीनवटा तस्वीरहरु देखाउँदै भन्यो, 'हेरत, फूलेको जस्तै देखिएन?'
उसको रक्सी मिश्रित श्वास सिधा मेरो नाकमा ठोकिन आयो । मैले तस्वीर भन्दा पहिले एकपटक पुलुक्क उसलाई हेरें । उ अझै सुन्दर मुस्कुराईरहेकै थियो ।
उसले जूम गरेर नजिक पार्दै खिचेका तीनवटै फोटोहरु साँच्चै फूल भएका शिरिषको हाँगाकै फोटो खिचेको जस्तै देखिन्थ्यो । कता कता त्यो क्यामराले खिचेको नभएर पेण्टिङ्ग बनाएको जस्तै पनि देखिन्थ्यो । अलि ध्यान दिएर हेर्दा क्यामरा हल्लिएर खिचिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो ।
उसले मलाई ठाडो घाँटि गरेर आकाशतिर त्यहि नाङ्गो शिरिषको हाँगा हेर्न भन्यो । मैले त्यसै गरें ।
फोटोमा केहिबेर घोरिएँ । आफ्नो फोक्सो पनि पोलेको सेकुवाझैं भैसकेको कल्पनाले एकछिन कहालिएँ र त्यसलाई आफ्नो वालबाट हटाएँ । आफु चुरोट सेवन गर्ने ब्याक्ति भएकोले असल कुरा भएर पनि सेयर गर्न चैं नैतिकताले धिक्कार्ला कि? सायद यहि थियो मनको दलील ।
हो, यहि एकचालीस दिनपछि म कहिं छाँगाबाट खसे जस्तो भएको छु । कहिँ हिमाली तलाउको एकदम चिसो पानीमा डुबेर निस्के जस्तो भएको छु । कतै बल्ल फुलबाट कोरलिएको चल्लाको आँखा उघ्रिए जस्तो भएको छु । के के भएको छु के के, कि उसलाई ह्रदय पोखेर धन्यवाद भन्न समेत नसक्ने भएको छु ।
Posted by दीपक जडित at 5:49 AM No comments: Links to this post
कविता : एक थुप्रो लाज
खुब उकालो चढेका छन्
आजभोली कविताहरु ।
यो राम्रो संकेत हो
हाम्रो आकाशमा कविताहरु अग्लिन ।
हामीले खाने अन्नजस्तै
माटोमा उम्रनु पर्थ्यो
जराहरुले माटो नछोडी
उँभो उँभो उकालिनु पर्थ्यो ।
तिमीले पनि यस्तै चाहेको थियौ भने
कहिँ न कहिँ कैफियत अवश्य छ
र त्यसैले फरक पारेको छ कवितामा
कि आज कवितामा माटोको महक छैन ।
केहि छ भने
बस् गोबरझैं छ
एक थुप्रो लाज
र हामी कलम समाउने हात धोइरहेछौं
बग्न नसक्ने नदिको जलमा ।
सुन निकानोर पारा,
माटो नछोडी उकालिएको भए
यतिखेर हाम्रो सगरमाथा हुनेथियो
विश्वमा सर्वोच्व सुन्दर कविता ।
कवितामा आउन हरेक कुरालाई अनुमति दिएपनि
सादा कागजको पेज सुधार्न नसकेर
झनझन नाङ्गेझार हुँदैछन् कविताहरु ।
लाजको वावजुद पनि
म यो भन्न सक्छु कि
हामीसँग पनि छैन
पुलमुनिबाट बगेको रगतको हिसाब ।
यस कविताका बारेमा-
धेरै पहिले निकानोर पाराको 'तरुण कविहरु' भन्ने नेपालीमा अनुवादित कविता पढेको थिएँ -
जसरी मन लाग्छ त्यसरी नै लेख
जुन शैली तिमीलाई मनपर्छ त्यसैमा
एउटै मात्र बाटो ठीक हो भन्ने
विश्वास दीगो राख्न अब
नसकिने गरी प्रशस्त रगत पुलमुनिबाट बगिसक्यो ।
कवितामा आउन हरेक कुरालाई अनुमति छ ।
तर खालि एउटै मात्र शर्त के छ भने:
सादा कागजको पेजलाई तिमीले सुधार्नुपर्छ ।
र यो कविताले यस्तरी प्रभाव छोडेको छ कि, कविता जसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने मान्दा मान्दै पनि हरेक पटक कविता लेख्दा सादा कागजको पेज सुधार्नु पर्ने शर्तले डर उमार्छ ।
त्यसो त धेरै कविताहरु लेखेको छु मैले र ति सबैले सादा कागजको पेज सुधारेका छन् भन्ने होइन बरु सादा कागजका पेज सुध्रिएनन् भन्ने हो पिरोलो र पछिल्लो समयमा त मैले कविता लेख्नै छोडिसकें भने हुन्छ ।
यो कविता विश्व कविता दिवसको दिन अर्थात मार्च २१ को दिन उनै चिलीका कवि निकानोर पारा र फेसबुकका मेरा समकालिन नेपाली कविहरु र कविताहरुलाई सम्झिएर लेखेको हुँ ।
दुर्भाग्य! त्यसैदिन फेसबुकमा र ब्लगमा राख्न असमर्थ भएँ ।
निकानोर पाराको बारे कविता सहित जानकारी सुत्र ।
Posted by दीपक जडित at 5:13 AM3comments: Links to this post
गजल : अन्धकार हो कृष्ण
सिधा अर्थले अन्धकार हो कृष्ण !
जगतको एकमात्र सार हो कृष्ण !
जो जस्तो बुझ्दछ उसलाई उस्तै,
बुझ्न सकेजति अवतार हो कृष्ण !
चुँडिने गाँसिने जीवात्मामा नित्य,
प्राणको सुविधा सञ्चार हो कृष्ण !
सबै जिन्दगीको रचयिता प्रति,
सदा अभिव्यक्त आभार हो कृष्ण !
कठिनाइ माथि असाध्य बनेका,
जीवनको मोक्षको द्वार हो कृष्ण !
Posted by दीपक जडित at 2:26 AM4comments: Links to this post
कविता : आँसुको उपहारले
स्केच : Tabish Shafi
मन उडेर फुङ्ग छ
खुइलिएर रंग उडेझैं
कि धोयौ रातदिन
म अनुहारमा तिम्रो
भदै बगिरहेको अविरल
के वर्षात के शिशिर
जुनसुकै मौसममा ।
मनसुन पर्खिएन कहिल्यै
उल्टो सँकेत गर्यो
विश्व तापमान वृद्धिको
र वर्षिरह्यो प्रेम पग्लिएर
सपनाको थोपाहरु चुहिँदै ।
जोर आँखाका कालो दहभरी
त्रासका कालै सर्पहरु गुँडुल्किँदा
जोर सर्पहरु भएर
दिउँसैमास टाँगिएका थियौं
जोडी इन्द्रधनुष ।
कतिञ्जेल लच्किन सक्छौ
घाम पानीको दिन रोजेर
तिमीले जोडेको पूलबाट
को हिँडेको छ
धरतीदेखि स्वर्गसम्म ?
एकसरो सूर्य छलेको दिन
धेरैले गरेथे तिम्रो
अँध्यारो मुहारको चर्चा
तर मैले आँखाभरी
सप्तरंगी फुलेको देखें
त्यसो त त्यसबेला
मेरो आँखाभरी सजिएको थियो
तिमीले दिएको आँसु ।
अझै पनि छ
आँसुको उपहार मसँग
सायद त्यसैले फरक पार्यो कि
Posted by दीपक जडित at 2:50 AM No comments: Links to this post
गजल : मुस्कान ओठमा छर्नु हो जिन्दगानी
कि त फुल्नु कि त झर्नु हो जिन्दगानी ।
या उमेरको नदि तर्नु हो जिन्दगानी ।
के के छौ सोचेको यो जिन्दगीमा गर्न,
धेरै नसोचेकै गर्नु हो जिन्दगानी ।
छोड्छ एकदिन जिन्दगी अघि बढ्न,
तब अतित सुमर्नु हो जिन्दगानी ।
कैले बुझ्ने हुन् रुने र रुवाउनेले,
मुस्कान ओठमा छर्नु हो जिन्दगानी ।
खुसीमा उम्लेर पोखिनेहरुलाई,
सुर्ताले गाला मुसर्नु हो जिन्दगानी ।
Posted by दीपक जडित at 1:59 AM 1 comment: Links to this post